Inqubo yokupholisha - Qiangzhong Machinery Technology Co., Ltd.
Ukuqedwa kobuso bezinhlelo zamapayipi zensimbi engenasici ephezulu kudlala indima ebaluleke kakhulu ekukhiqizeni okuphephile kokudla nemithi. Ukuqedwa kobuso obuhle kuyagezwa, kunciphisa ukukhula kwamagciwane, ukumelana nokugqwala, futhi kususe ukungcola kwensimbi. Ukuze uthuthukise ikhwalithi ephezulu yohlelo lwamapayipi wensimbi engagqwali, okungukuthi, ukwenza ngcono isimo se-morphology nesakhiwo se-morphological, nokunciphisa inani lezendlalelo, izindlela ezivamile zokwelashwa komhlaba zimi kanje:
1. Ukugaya nokupholisha iMechanical (Imishini Epholishiwe) ebizwa nge-MP
Ukugaya ubuso okuhle ukwenza ngcono ukuhlangana komhlaba kungathuthukisa ukuthungwa komhlaba ngaphandle kokuthuthukisa ukwakheka kokuziphatha, amazinga wamandla, nenani lezendlalelo.
2. IBuffed Polished (Buffed Polished) ebizwa nge-BP
Indlela esetshenziswa kakhulu embonini yensimbi engenasici ukukhulisa ukukhanya kobuso, yize inani likaRa lingaba lihle kakhulu, imifantu eminingi ingabonwa ngaphansi kwesibonakhulu se-elektroni, indawo yangempela ikhulisiwe, kanye nesakhiwo se-ferrite ne-martensite esihlukanisiwe kukhona endaweni. Ubuso bungcoliswe ukungcola okuningi kanye nezinhlayiya ezicasulayo.
Ngenxa yokusebenzisa i-polishing paste, izinsalela eziningi ezingcolile zigcinwa ezindaweni ezibekiwe bese zikhishwa kancane kancane kuketshezi, zingcolisa ukudla.
3. Ifakwe emanzini anosawoti noma adliwe (Pickled & Passivated / Chemically Polished) abizwa nge-AP ne-CP
Ipayipi lifakwa emanzini anosawoti noma lidluliswe ngaphandle kokukhulisa ukuqina kobuso, kepha lisusa izinhlayiya ezisalile ebusweni futhi lehlise amazinga wamandla ngaphandle kokunciphisa inani lezendlalelo. Kwakheka ungqimba oluvikelayo lwe-chromium oxide ebusweni bensimbi engagqwali ukuvikela insimbi engagqwali ekugqonyeni kwe-oxidation.
4.I-Electro Polishing (i-Electro Polished) ebizwa nge-EP
Ngokupholisha i-electrochemical, i-surface morphology nesakhiwo kungathuthukiswa kakhulu, futhi indawo yangempela ingancishiswa. Ubuso yifilimu evaliwe, eminyene ye-chrome oxide ene-energy esondele ezingeni elijwayelekile le-alloy futhi nenani lemidiya liyancishiswa.
Ukuze kuzuzwe umphumela ophelele we-electropolishing, ukupholisha ngomshini kumele kube ukupholisha okunamandla.
Kumele kuqashelwe ukuthi inani elifanayo leRa alimeleli ukwelashwa okufanayo komhlaba.